Rafarasoa Niaina Pâquerette no anarany feno, i Pâ no fiantson’ny fianakaviana sy ny mpiara-monina aminy azy. Atleta manana ny maha izy azy i Pâ, efa tompondaka tamin’ny sokajy taona aminy izy ny taona 2018 amin’ny hazakazaka 8km.
Sahirana ara-pivelomana ny ray aman-dreniny. Tsy afaka nanohy ny fianarany i Pâ noho izany. Noraisin’ny Governoran’Itasy, Jeneraly Andriamanana Maherizo an-tanana ny famerenana indray an-tsekoly an’ity atleta sahirana ara-pivelomana ity. Ny 25 febroary 2020 i Pâ no niverina nandingana ny varavaran’ny sekoly indray, hanohy ny kilasy T3, rehefa nandao izany ny taona 2017.
Tonga nanatitra azy tao amin’ny EPP Mangarivotra ao Miarinarivo ny Governora sy ny Talem-paritry ny fanabeazam-pirenena sy ny fanofanana teknika sy arak’asa Itasy niaraka tamin’ireo ray aman-drenin’i Pâ.
Nilaza ny Governora fa hanohana an’i Pâ hatrany amin’ny fianarana ataony ary hanaramaso ny fahazotoany sy ny vokatra azony.
(Loharanom-baovao: Gouvernorat Itasy)